“ကိုးကန့် အမျိုးသားနေ့” သတ်မှတ်ရေး တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒ ရယူဖို့လို | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း “ကိုးကန့် အမျိုးသားနေ့” သတ်မှတ်ရေး တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒ ရယူဖို့လို
Ethnic Kokang soldiers of newly formed Kokang ethnic armed group stand outsideadeserted market asaconvoy carrying diplomats and journalists visits the Myanmar-China border town of Laukkai on September 8, 2009. The Myanmar regime has recently stepped up its decades-long campaign against minority groups, with offensives against ethnic Chinese rebels in the northeast in August and Christian Karen insurgents near the Thai border in June. In August an outbreak of fighting in Kokang,amainly ethnic Chinese region of Myanmar's Shan state, showed tensions near the surface and earnedarare rebuke from Beijing, usually Myanmar's closest ally. AFP PHOTO / POOL / Khin Maung Win / AFP PHOTO / POOL / KHIN MAUNG WIN
“ကိုးကန့် အမျိုးသားနေ့” သတ်မှတ်ရေး တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒ ရယူဖို့လို
“ကိုးကန့် အမျိုးသားနေ့” သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အားလုံးပါဝင်တဲ့ ဦးစီးအဖွဲ့ကို အရင်ဖွဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု အားလုံးရဲ့ သဘောဆန္ဒကို ရယူကာ သတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်က ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁) က ဦးကျော်နီနိုင်ရဲ့ ကိုးကန့် အမျိုးသားနေ့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု သတ်မှတ်ရေး မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မနေ့က ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့ အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာ ဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်က ဖြေကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုးကန့် အမျိုးသားနေ့ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားတွေက အသိအမှတ်ပြုခြင်းကသာ သင့်တော်ပြီး နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ မလိုဘူးလို့လည်း ဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်က ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။
“ကိုးကနျ့ အမြိုးသားနေ့” သတျမှတျရေး တိုငျးရငျးသား မြိုးနှယျစုအားလုံးရဲ့ ဆန်ဒ ရယူဖို့လို
“ကိုးကနျ့ အမြိုးသားနေ့” သတျမှတျဆောငျရှကျဖို့အတှကျ အားလုံးပါဝငျတဲ့ ဦးစီးအဖှဲ့ကို အရငျဖှဲ့ပွီး သကျဆိုငျရာ တိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစု အားလုံးရဲ့ သဘောဆန်ဒကို ရယူကာ သတျမှတျဖို့ လိုအပျတယျလို့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားရေးရာ ဝနျကွီး နိုငျသကျလှငျက ပွောပါတယျ။
ရှမျးပွညျနယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၁၁) က ဦးကြျောနီနိုငျရဲ့ ကိုးကနျ့ အမြိုးသားနေ့ တရားဝငျ အသိအမှတျပွု သတျမှတျရေး မေးခှနျးနဲ့ ပတျသကျပွီး မနကေ့ ဇနျနဝါရီလ ၂၉ ရကျနေ့ အမြိုးသား လှတျတျောမှာ ဝနျကွီး နိုငျသကျလှငျက ဖွကွေားသှားတာ ဖွဈပါတယျ။
ကိုးကနျ့ အမြိုးသားနကေို့ ကမ်ဘာတဈဝနျးရှိ၊ ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံတဈဝနျးလုံးရှိ ကိုးကနျ့တိုငျးရငျးသားတှကေ အသိအမှတျပွုခွငျးကသာ သငျ့တျောပွီး နိုငျငံတျောက သတျမှတျ ဆောငျရှကျပေးဖို့ မလိုဘူးလို့လညျး ဝနျကွီး နိုငျသကျလှငျက ရှငျးလငျးပွောကွားပါတယျ။
Previous articleမြောက်ဦးအရေး အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေနဲ့ မညီရင် လွှတ်တော်က စွတ်စွဲပြစ်တင်သွားမယ်
Next articleပညာရေးအသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်ပေးရေး တောင်းဆိုမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်